एजेन्सी । विश्वब्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण पर्यटन क्षेत्रमा असर परिरहेको अवस्थामा भियतनामले भने पर्यटक आकर्षित गर्न गज्जबको उपाय लगाएको छ । भियतनामको राजधानी हनोइमा निर्माण भएको एक होटल अहिले विश्वको ध्यान खिच्न सफल भएको छ । होटलको एउटै विशेषता हो – होटलका सवैथोक सुनै सुनबाट निर्माण गरिनु । अनौठो बनावट र […]
एजेन्सी । करोडौँ वर्षअघि पृथ्वीबाट लोप भएका डाइनसोरहरू भीमकाय थिए भन्ने धेरै बुझाइ छ। तर एउटा नयाँ अनुसन्धानका क्रममा तिनका पुर्खा वामन भएको प्रमाण फेला परेको छ। म्याडग्यास्करमा भेटिएको डाइनसोरको नातेदारको एउटा जीवाश्ममा त्यस्तो प्रमाण भेटिएको हो। उक्त जीव झन्डै २३.७ करोड वर्षअघि त्यो क्षेत्रमा विचरण गर्थ्यो र केवल १० सेन्टिमिटर अग्लो थियो। उक्त नमुनाले […]
एजेन्सी-कोरोना भाइरस कोभिड १९ बाट जोगिन मास्क अनिवार्य भएको छ । संक्रमणबाट जोगिन भारतका एक व्यापारीले भने सुनको मास्क लगाउन थालेका छन्। पुनेका शंकर कुरहडे नाम गरेका ती व्यापारीले चार हजार अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने मास्क लगाउन थालेका हुन्। ६० ग्राम सुनको उक्त मास्क बनाउन शिल्पकारलाई आठ दिन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपी लेखेको छ […]
भाइरल बन्यो चितुवालाई दाम्लोमा बाँधेर हिँडाएको भिडियो
काठमाडौँ- यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एक प्रहरीले दाम्लोले चितवालाई बाँधेर हिँडाएको दृश्य चर्चामा छ । भिडियोमा एउटा चितुवालाई दाम्लोमा बाँधेर सडकमा हिँडाइएको छ । चितुवा सँगसँगै मान्छेको भीड पनि हिँडिरहेको छ। सँगै हिँडेको भीड रमाइलोका लागि अनि फोटो खिच्न । नाम्लोमा बाँधेर चितुवालाई डोर्‍याउदै हिड्ने प्रहरी हुन अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट मिलन चोकका प्रहरी जवान अनिल […]
कोरोना भाइरस : विवाह पनि अनलाइनबाटै !
एजेन्सी- कोरोना महामारीका कारण धेरै जोडीहरुले आफ्ना विवाहका योजनाहरु स्थगित गरे। तर, दक्षिण कोरियाको सिओलका एक जोडी भने यसै महामारीबिच वैवाहिक बन्धनमा बाँडिए। सिओलका जिसु हा र जी–य ले एउटा खाली हलमा भर्चुअल (अनलाइन) विवाह गरेका हुन्। दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम कम्पनीले उनीहरुको लागि भर्चुअल विवाहको आयोजना गरेको हो। कम्पनीले महामारीका कारण समस्यामा परेका […]
एक कम्पनीको घोषणा : राति ९ घण्टा सुत्नेलाई एक लाख दिइने
एजेन्सी- प्राय: मानिस सुत्नका लागि मरिहत्ते गर्छन् । कोहि मानिस त सुतेपछि आफ्नो काम सबै बिर्सिएर सुत्ने गरेको समेत पाइन्छ । हामी कामको तनावले गर्दा राति पनि आरामले सुत्न सक्दैनौँ । तर अब सुत्ने काम पेशाको रुपमा आइरहेको छ । भारतको बेंगलुरुस्थित एक स्टार्ट अप कम्पनीले ९ घण्टा सुत्ने जागिरका लागि आह्वान गरेको छ । […]
कोरोना प्रभावः बास्केटबल खेल्दै गरेको ४९ सेकेण्डको भिडियोमा वर्ष २०२० को झल्को !
काठमाडौं- विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व नै अस्तव्यस्त छ । कोरोनाको जोखिम रोक्नका लागि अधिकांश मुलुकले ‘लकडाउन’ लागू गरेका छन् । लकडाउन लागू भएसँगै घरभित्र बसेकाहरुलाई समय कटाउन नै हम्मेहम्मे परेको छ । घरभित्रै बसेकाहरु कोही ‘इनडोर गेम’मा व्यस्त बनेको पाइएको छ भने कोही टिकटकमा भुलेका छन् । मिल्नेसम्म खुल्ला भएमा कोही […]
कोरोनाको संक्रमणलाई ध्यान दिँदै सेनाले थाल्यो तयारी
काठमाडौं । नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो आन्तरिक तयारी तिव्र पारेको छ । सेनाले आन्तरिक तयारी स्वरुप सैनिक मुख्यालयमा अस्थायी टेन्ट निर्माण गरी आफ्ना चिकित्सकहरुलाई तालिम दिएको छ । उपत्यका बाहिरका नेपाली सेनाका अस्पतालहरुमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई तालिम दिएको हो । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले पोखरा, इटहरी र नेपालगञ्ज अस्पालबाट चिकित्सकसहित ६ जना, […]
धादिङमा तीन सय जन्ती बेहुलीबिना रित्तै फर्किए
धादिङ । धादिङमा ११ वटा गाडीमा आएका ३ सय जन्ती रित्तै फर्किएका छन् । बेहुलीको उमेर नपुगेको भन्दै स्थानीयले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि ३ सय जन्ति विवाह मण्डपमै नपुगी रित्तै फर्किएको हो । यो धादिङको गजुरी गाउँपालिका वडा नं.६ मिलनटारमा घटेको घटना हो । धुर्व सुवेदीले आफ्नो १८ वर्षिय छोरी सपना सुवेदीको गल्छी गाउँपालिका ६ बाहुन […]